Haddii aadan magacaaga iyo midabkaaga shaqo ku heleynin maxaad sameyn lahayd? | Radio Hormuud
Haddii aadan magacaaga iyo midabkaaga shaqo ku heleynin maxaad sameyn lahayd?
"Waxaan koray anigoo aan ku qanacsaneyn magacayga, marka waxaan go'aansaday inaan iska badalo" ayay tiri Rawan Mohamed, oo ah gabar muslimad ah oo u dhalatay dalka Britain balse asal ahaan ka soo jeedo waddanka Sudan.
Gabadhan oo 22 jir ah, oo ku nool magaalada Manchester ayaa sheegtay in ay ku guuleysatay shaqooyin badan tan iyo markii ay magaceeda ka dhigtay Rowan
"Waxay ila tahay inay igu wareeraan, dadka wareysiga qaada waxay ii maleynayaan in aan ahay gabar iska dhal ah ama Irish ah, marna ma aysan fileyn in aan ahay gabar madow" ayay tiri.
Cilmi-baaris ay sameeyeen aqoonyahaano ka tirsan jaamacadda Oxford ayaa lagu sheegay in walaaca ay qabto gabadhan laga yaabo in ay wax ka jiraan.
Sida laga soo xigtay cilmi-baarayaasha mac-hadka cilmi baarista bulshada ee Nuffield, Muwaadiniinta ingiriiska ah ee ka soo jeeda qowmiyadaha laga tirada badan yahay waa inay codsiyo shaqo diraan boqolkiiba 60% si looga soo jawaabo marka loo barbar dhigo dhiggooda dadka caddaanka ah ee asalkoodu uu ingiriiska yahay.
Intii u dhaxeysay sannadihii 2016-kii ilaa 2017-kii, waxay direen qiyaastii 3,200 oo codsiyo shaqo oo been abuur ah, kuwaas oo kamid ah shaqooyinka la xariira farsamada gacanta, makhaayadaha, dukaamada, xisaabiyeyaasha iyo injineerrada.
Dhammaan intii soo codsatay shaqada waxay ahaayeen muwaadiniinta Ingiriiska ama kuwa u guuray UK markay da'doodu ahayd lix sanno, isla markaana haystay warqadaha CV-ga oo ka badan hal.
Waxa kaliya ee ay baddalaan waa magaca oo ay ku saleyeen asalkooda jiinsiyadeed.
Dr Valentina Di Stasio,oo barfasoor ka ah jaamacadda Utretch ee dalka Holan, ayaa sheegay in heerka takoorka shaqa qorista uusan waxba iska baddalin tan iyo sannadkii 1960-kii.
Miriam Animashaun, oo ah 24 jir ka soo jeedda London ayaa ku raacsan fikirkaas.
Image captionMiriam Animashaun waxay ku dhawaatay iney magaceeda baddasho si ay shaqo u hesho
Miriam waxay ka qalin jabisay Jaamacadda Southampton sanadkii 2016kii, waxay haysataa shahaadada degree-ga filsafada iyo dhaqaalaha, balse waxay ku qaadatay in ka badan hal sanno si ay u hesho shaqo.
Ardey badan oo aqoonteeda iyo xirfadeeda oo kale leh waxaa shaqo la siiyay ka hor inta aysan ka qalin jabinin jaamacadda.
"Celcelis ahaan waxaan diri jiray 35 codsiyo ka hor inta aanan la iiga soo jawaabin, waxaan ku dhawaaday in aan baddalo magacayga Nigerianka ah" ayay tiri.
Dr Zubaida Haque, oo ah ku xiigeenka agaasimaha waaxda sinnaanta ayaa sheegtay in isir-nacaybku uu wali jiro.
"Maalmahan lama tixgaliyo degree-ga aad heysato ama heerkaaga waxbarasho, waxaa la qiimeynayaa midabkaaga, diintaada iyo jinsigaaga, ee ma aha waxa aad sameyn karto' ayay tiri Zubaida oo la hadashay BBC-da.